डेंगुपीडितले खान नहुने ३ चीज | Bhalakushari
डेंगुपीडितले खान नहुने ३ चीज
डेंगु निकै गम्भीर रोग हो, जसमा यदि संक्रमितले समयमा उपचार नपाएमा ज्यानै पनि जान सक्छ । वर्षातको मौसममा डेंगु संक्रामक लामखुट्टे ज्यादा विकसित हुन्छन्, किनकि, यस समयमा यत्रतत्र पानी जमेको हुन्छ । यही कारण नै यस मौसममा डेंगु रोगको चपेटमा कैयौँ मानिस आउने गर्छन् । नेपालमा पनि पछिल्लो समय डेंगुको संक्रमण ह्वात्तै बढेको अवस्था छ । यस सिजनमा मात्र अहिलेसम्म करिब साडे ३ हजार मानिसमा डेंगुको संक्रमण भइसकेको छ भने नियन्त्रणका सबै प्रयास विफलसिद्ध भएको अवस्था छ । झन्डै ६० जिल्लालाई प्रभावित बनाइसकेको डेंगुको संक्रमण फैलिनेक्रम जारी छ । यस्तोमा संक्रमणपूर्व नै सावधानी अपनाउनु तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सरसफाइमा विशेष ख्याल राख्नु जरुरी छ ।
डेंगु संक्रामक लामखुट्टे सफा पानीमा हुर्कन्छन् । सबैभन्दा बढी डेंगु संक्रामक लामखुट्टेले कुलर र पानीको ट्यांकीमा जमेको पानीमा आश्रय लिने जोखिम रहन्छ । लामखुट्टेजनित रोगमध्ये डेंगुको संक्रमण प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । तसर्थ, डेंगुबाट बच्ने सरल तरिका छ, तपाईं आफूआसपासको वातावरण सफा राख्नुहोस्, पानी जम्न नदिनुस् र समय–समयमा कुलर र ट्यांकीको सफाइ गर्नुहोस् ।
रोकथाम उपचारभन्दा राम्रो हो, तर कहिलेकाहीँ सावधानी अपनाउँदाअपनाउँदै पनि डेंगुको चपेटामा आउन सकिन्छ । डेंगुका केही सामान्य लक्षण छन्, जस्तै, टाउकोदुखाइ, उल्टी हुनु, शरीर दुख्नु, कडा ज्वरो, शरीरमा रातो दाग आदि । यदि डेंगु अधिक गम्भीर छ भने गिजाबाट रगत आउनुका साथै पेटमा गम्भीर दुखाइ र रगतको उल्टीसमेत हुन सक्छ । यस्तोमा लापरबाही गरिएमा त्यो मृत्युको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले डेंगुको सामान्य लक्षण देखिनेबित्तिकै नजरअन्दाज नगरी तुरुन्त चिकित्सकबाट जाँच गराउनुपर्छ ।
उपचारसँगसँगै खानपानमा सजगता आवश्यक
डेंगुमा समयमा उपचार पाउनु जति आवश्यक छ, त्यति नै यो गम्भीर रोगमा खानपानमा सजगता आवश्यक छ । चिकित्सकले पनि डेंगु संक्रमितले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । डेंगु संक्रमितले बाख्राको दूध, नीमको पात, मेवाको पातको रस, किवी तथा सुन्तलाको सेवन गर्नाले रोगबाट छिटो मुक्ति पाउन सकिन्छ । यी वस्तुको सेवनले शरीरमा प्लेटलेट्सको मात्रा बढाउनमा सहयोग गर्छन् र डेंगु छिटो निको पार्नमा सहयोग गर्छन् । यहाँ केही त्यस्ता खाद्यपदार्थबारे बताइन्छ, जसको सेवन डेंगु संक्रमितले कदापि गर्नुहुँदैन ।
डेंगु संक्रमितले यी चिज भुलेर पनि नखानुहोस्–
१. तेलमा तारेको वा भुटेको खानेकुरा
डेंगु संक्रमितले तेलयुक्त तथा तेलमा पकाइएको भोजनबाट बच्नुपर्छ । यतिवेला उमालिएको, बाफमा पकाइएको वा नतारीकन पकाइएको खाना नै खानुपर्ने हुन्छ । तेलमा तारेका खानामा चिल्लोपदार्थको मात्रा अधिक हुन्छ, जो उच्च रक्तचाप तथा कोलेस्टेरोल बढाउनमा जिम्मेवार हुन्छन् । यस्ता खानाले डेंगु संक्रमितलाई पुरानो अवस्थामा फर्किनमा बाधा पुर्याउन सक्छन्, किनकि, यस्ता खानाले शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर गर्छन् ।
२. मसालेदार खाना
डेंगु संक्रमितले मसालेदार खानाबाट पनि बच्नुपर्छ । मसालेदार खानाले पेट स्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्दछ र यसले पेटमा एसिड जम्मा हुन पुग्छ । यस्ता खानाले पेटमा गडबडी उत्पन्न गर्नुका साथै डेंगुको चपेटाबाट निक्लिनमा बाधा उत्पन्न गर्छन्, किनकि यस समयमा संक्रमित व्यक्ति ज्यादै कमजोर हुन्छ र शरीरले दोहोरो रोगसँग लडिरहेको हुन्छ ।
३. क्याफिनयुक्त पेयपदार्थ
डेंगु संक्रमितलाई तरल पदार्थ धेरै खान सल्लाह दिइन्छ, किनकि, यतिवेला शरीरमा तरल पदार्थको बढी अवाश्यकता पर्दछ । तर, संक्रमितले क्याफिनयुक्त पेयपदार्थबाट भने टाढै रहनुपर्छ । क्याफिनयुक्त पेयपदार्थ मुटुको गति, थकान, मांसपेशीको क्षयीकरणमा द्रुत वृद्धिको कारण बन्छन् । यस्तोमा डेंगुपीडितले अनारको जुस, मेवाको पातको रस, तातो पानीको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ । यद्यपि, चिकित्सकले डेंगुमा धेरै पानी मात्र नपिइरहनसमेत सल्लाह दिने गरेका छन् ।